Hevitra MPANOHARIANA | Septambra 2008
Biraom-pokontany: nitana ny teny nomeny ny filoha
2008-09-06 @ 14:23 in Politika
Mbola avy amin'ny fandehandehanako teo ihany, raha nizotra kely nianatsimo sy nianavaratra andrefana aho no nahatazana irony trano efajoro miloko mavo sy manga irony, iray isaky ny tanàna somary bebe mponina ka azo heverina hahavita fokontany iray. Nanontany izay olona teo akaikiko aho aloha hoe: ireny ve ny biraom-pokontany, nihatoka nanaiky ny lohan'izay nahalala. Ny manaraka ny lalam-pirenena fahafito dia tsy misy anaram-pokontany fa ny tamin'ny lalam-pirenena fahaefatra kosa voasoratra tsara ny anarana.
Nalaiko sary mihitsy na mirifatra aza ny fiara saingy mbola tsy nentiko taty ampiasana moa fa amin'ny manaraka mametraka azy eto ihany. Nisy ny toerana tsy mbola nijoro ny trano fa hita kosa fa andalam-panamboarana. Noho izaho tsy nihetsika firy eto Antananarivo renivohitra no tsy mahita trano vaovao mijoro fa rehefa mandeha amin'ny tanàna kely kosa dia mahita tsara mihitsy. Mba tsy nandiso fanantenana kosa ho'aho ny filoham-pirenena tamin'ity tranga iray ity...ary azo heverina fa nahatsangana trano 10 000 mahery izy raha ny trano voaorina manaraka ny lalam-pirenena nandehanako no tarafina. Tsy fanatra anefa izay tena marina amin'iny aloha.
Fa zavatra hitako tamin'iny faritry Vakianakaratra iny ihany kosa ny fijoroana trano vaventiventy ho ana kaominina ambanivohitra lehibebe. Lehibebe ihany koa ny trano ary azo tarafina ho Biraon'ny Kaominina ihany koa.(Misy sary ihany koa ity fa dia amin'ny manaraka apetraka, loza koa fahateren'ny fotoana ity). Azo lazaina fa te-hametraka fa miasa hatrany ambanivohitra ny fitondrana amin'ny zava-bitany ka tsikaritro aloha.